Vokatra lehibe - Yangzhou qiangjing fanatanjahantena Co., Ltd.
Ny fanohanana fehikibo sy marefo dia miaro amin'ny ankapobeny sy ny fitsaboana amin'ny fanaintainana amin'ny valahany amin'ny fihanaky ny hozatra lumbar ary ny fihanaky ny lumbar. Ity karazana fantsom-bolo ity dia somary mahazo aina ary tena akaiky ny vatana. Eny, afaka mampiasa tohana mafy be ny valahanao ianao mba hiarovana tsara kokoa ny hazondam-baravarana. Ary ho an'ny fatiantoka mavesatra, ny hatsembohana miadana amin'ny valahany no safidy tsara indrindra. Manampy anao ny hatsembohana amin'ny fotoana fohy ary hihinana kaloria bebe kokoa. Misy ihany koa ny fitsaboana magnetika, infrared ary ny fantsom-panafody hafa azo nofidina arakaraka ny toe-javatra iainanao.
Ny brace ny lohalika dia misy fiasa lehibe telo: ny fikoloana braking, ny fitahirizana ny hafanana ary ny fikarakarana ara-pahasalamana.
Ny fiombon-dohalika dia mihetsika ho toy ny cushion mba hizara lanja. Ny fanatanjahan-tena dia manindry mafy ny lohalika, izay mety hiteraka aretina amin'ny lohalika. Miaraka amin'ny tendan'ny lohalika, ny patella dia azo apetraka amin'ny toerana tsy miovaova mba hahazoana antoka fa tsy mora maratra. Raha maratra ny tonon-dohalika dia mety hampihena ny fihanahana ny lohalika ary hampihenana ny flexion ny lohalika, miaro ny tonon-dohalika amin'ny aretin-dohalika.
Ny tonon-dohalika dia marefo amin'ny ririnina. Azonao atao ny mampiasa pad padan'ny lohalika mba hampafana ny lohalika ary hiantoka ny fandehanan-dra ara-dalàna hatrany amin'ny lohalika. Nitafy azy ireo ny be taona amin'ny ririnina mba hiarovana ny lohaliny amin'ny arthritis. Ny fitazonana ny fanaovana maharitra mandritra ny fotoana maharitra dia afaka misoroka ny rheumatism. Departemantan'ny aretina
Amin'ny fanatanjahantena, noho ny postures isan-karazany, dia mora ny miteraka ratra na aretin-koditra maro amin'ny
sendra ny lohalika. Ny papetan'ny lohalika dia mifanentana amin'ny lohalika ny lohalika mandritra ny fanatanjahan-tena ary mampihena ny fanaintainan'ny lohalika. Ny padiky ny lohalika vokarintsika dia mahomby manaparitaka ny fahatapahan-tànana Ny tsindry amin'ny lohalika dia mampihena ny mety ho ratra amin'ny fanatanjahan-tena.
Mpanitsy ny posture
Ampio handoro tavy, fanazaran-tena mandritra ny 10 minitra, hatsembohana mandritra ny antsasak'adiny, fanatsarana fahombiazana mandoro matavy, fanatanjahan-tena haingana ho an'ny valahany manify.
Ampiasao ny baoty neoprene hanamboarana ao anatiny, hitafy avy eo ny fanatanjahan-tena dia afaka manangona hafanana am-bavony amin'ny fomba mahomby, fa tsy mikosoka.
Mamerina ny curvature voajanahary eo amin'ny vatana, manala ny tsindry hazondamosin'ny hazondamosina, mampihena ny harerahana, afaka miaro amin'ny hatoka sy ny valahany izy ary afaka mamokatra ny vokatry ny fangarony grika ary mora mamolavola.
Ny fehin-tànana dia misy fiantraikany manan-danja amin'ny fampihenana ny fivontosana, miaro ny faritra maratra ary mamela ny faritra maratra hihanaka. Mandritra izany fotoana izany, ny fantsom-bavony dia mety hampihena ny fiantraikany eo amin'ny tànana raha milalao fanatanjahan-tena. Ireo mpilalao manana tanjaka ambany dia mazàna mifantina fitaovam-piarovana sasany. Mba hampihenana ny fiantraikan'ny paosina eo amin'ny hatry sy ny sandry, ny pataloha dia azo anaovana kofehy malefaka ary manampy trotraka. Izy io dia misakana ny fantsom-pialana amin'ny fantsom-pivavahan-tànana ary manentana ny fandehanan-dra. Ny fametahan-tànana dia afaka manamaivana ny tsindry amin'ny hantsana ary ny hery miantraika be hisorohana ny ratra amin'ny tànana. Manana ny fiasan'ny fisorohana ny fihenjanana sy fandroahana izany
Manatsara ny toerana tsy mety, ny asa sedentary, ny sprains Joint, ny fiarovana ny fampiasana GYM